Kutheni le nto imbali ka-Skype inyamalala? - I-Skype
Eyona > I-Skype > Imbali ye-Skype ilahlekile-indlela yokuthatha isigqibo
Imbali ye-Skype ilahlekile-indlela yokuthatha isigqibo
Kutheni le nto imbali ka-Skype inyamalala?
Emva kwenqaku elithile, eyakho yakudalaI-Skypeimiyalezo ayisabonakali kwiwindows yengxoxo ngaphakathiI-Skype. Oku kunceda ukugcina isikrini singabinanto kwaye kukunceda ukuba ubone unxibelelwano lwakho lwamva nje ngaphandle kokuphazanyiswa ngabantu abadala.I-Skypeayicimi le miyalezo xa iyeka ukubonisa.
Ndiyifumana njani imbali yeSkype?
Fumana incoko yangaphambili nomntu othile
VulaI-SkypeyezoShishino, kwaye kuluhlu lwakho lwabafowunelwa, cofa ekunene kuloo mntu ufuna ukujonga incoko yakhe yangaphambili.
Cofa Fumana iincoko zangaphambili.
dcom isilumkiso sokumisela
Fumana icandelo 'Gcina imbali' kwaye ukhethe ixesha ekufuneka ligcinwe kwimenyu ebonakalayo. Khetha 'Ngonaphakade' kwaye ucofe u'Gcina '. Ngoku imbali yengxoxo ihlala igcinwa kwaye igcinwe ngokupheleleyo.
Ukubuyisela yonke imbali yengxoxo, ukuthumela kunye nokufumana iifayile, yenza oku kulandelayo: Vala i-Skype. Yiya kwifolda C: Abasebenzisi igama lomsebenzisi AppData Ukuzula Skype. Le folda iqulethe yonke idatha ye-Skype kubandakanya naziphi na iiakhawunti ezisayine kwi-Skype kule khompyuter, ukhetho olufanelekileyo iya kuba kukhuphela yonke ifolda.
Khuphela ezi fayile kwi-flash drive, umzekelo. Ilungile. Emva kokufaka kwakhona inkqubo yokusebenza okanye ukufomatha i-hard drive, kulula kakhulu ukubuyisela imbali yengxoxo kunye nazo naziphi na iifayile ezithunyelweyo kunye neefayile ezifunyenweyo ezazikho ngexesha lokudalwa, konke ekufuneka ukwenzile kukubeka ezo fayile kwakhona ifolda C: Abasebenzisi igama lomsebenzisi AppData Ukuzula Skype emva kokufaka iSkype.
Indlela yesibini. Uyibuyisela njani imbali yengxoxo, ifunyenwe kwaye ithunyelwe iifayile, kunye nokufikelela kwiakhawunti ukuba akukho kugcino lwedatha ye-Skype. Ungayifumana njani iMbali yeNgxoxo ye-Skype Emva kokufaka kwakhona inkqubo yokusebenza okanye usetyenziso ngokwalo kwaye xa iqalile okokuqala, iSkype izakukhuphela ngokuzenzekelayo inxenye yembali yengxoxo kunye nedatha yomsebenzisi egcinwe efini.
Le datha igubungela iintsuku ezingama-30 zokugqibela Ke kuya kufuneka wenzeni ukuze ubuyise imbali ye-Skype ixesha elide kuneentsuku ezingama-30 ezidlulileyo? Kuya kufuneka ubeke endaweni ifayile esele ikhona, ekhoyo apha: C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkypemit the same file that contains all the Skype history. Ukufumana ifayile enjalo, masibuyisele ifayile ye-Skype kwi-hard drive apho ikopi yenkqubo nayo yonke imbali yayifakwe ngaphambili.
Sebenzisa uHetman Isahlulelo kwakhona kwaye uskene i-hard drive k.Cofa indawo ethi 'Inqaku leWizard. Ukuba ufuna ukubuyisela imbali ye-Skype emva kokucima inkqubo kunye nokuyifaka kwakhona, ukuskena ngokukhawuleza kwehard drive kwanele.
Ukuba inkqubo yokusebenza ibuyiselwe kwakhona kunye / okanye i-hard drive ifomathiwe, jonga umphathi wedatha ngohlalutyo olupheleleyo. Kule meko ndikhetha uhlalutyo olupheleleyo. Okulandelayo.
Lindela ukuskena ukugqiba. Ilungile: inkqubo ifumene inani leefayile. Ukufumana ifayile oyifunayo ngokukhawuleza, sebenzisa umsebenzi wokukhangela: cofa nje ekunene kwisimboli seglasi ekwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini, faka igama lefayile kwi 'File s uchen 'kwaye ucofe ku' Khangela '.
Igama 'main.db', kwaye ndiza kukhetha elinye elinomhla wokudala wokudala kwaye ndilibuyisele. Ilungile.
Yiya kwi C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype ifolda kwaye ubeke endaweni esele ikhona .db ifayile ebuyiselweyo.Ready.Skype imbali engaphezulu kweentsuku ezingama-30 ezidlulileyo ezibuyisiweyo.
iingxaki zokuprinta i-onenote
Qaphela, uya kudinga amagama eefayile kwimbali yengxoxo uyazi ukuba kufuneka ubuyisele. Emva koko khuphela le fayile kwifolda ye 'My Skype Receives Files' ebekwe apha: C: Users UserName AppData Roaming Skype My Skype Receives Files. Ngale ndlela, imbali yengxoxo ye-Skype iya kubonisa ukuthumela kunye nokufumana iifayile ezilahlekileyo ngenxa yokufaka kwakhona i-Skype okanye iWindows okanye ukufomatha i-hard drive.
Ukubuyisela ukufikelela kwiakhawunti ye-Skype Ukuba iakhawunti ye-Skype ilahlekile okanye ilibalekile, ukufikelela kungabuyiselwa ngolu hlobo lulandelayo: Ngaphambi kokwenza oku, kuya kufuneka uhlengahlengise useto lwenkqubo ukuze i-Skype isebenze ngokuzenzekelayo ngaphandle kokungena kunye negama lokugqitha, emva koko uSkype uya kuthi qala kwimowudi yesiqhelo. Ngokwesiqhelo olu khetho lwenziwe ngokungagqibekanga, ngenxa yoko akufuneki ube nazingxaki. Ngoku ufuna ifayile ye-config.xml, enedatha yokungena kunye negama lokugqitha lomsebenzisi.
Ungayifumana le fayile kwindawo yogcino, kwaye kwinxalenye yokuqala yeli nqaku ndibonisile ukuba ungayenza njani. Emva koko, ikopi kwaye uyibuyisele kwifolda C: Abasebenzisi Igama lomsebenzisi AppData Ukuzula Skype I-YourLoginSkype. Ukuba akukho kugcino lwe-Skype, ungayibuyisela le fayile ngendlela efanayo nefayile ephambili ye -.db okanye ifunyenwe kunye neefayile zeSkype ezithunyelwe- ngoncedo lweHetman PartitionRecovery.
Yiyo yonke loo nto okwangoku. Enkosi ngokujonga. Ndiyathemba ukuba le Vidiyo iya kuba luncedo kuwe, ukuba ulithandile eli nqaku nceda ucofe iqhosha u-'Like' apha ngezantsi kwaye ubhalise kwisitishi sethu ukuze ubone okungakumbi.
Zaya phi zonke izingxoxo zam zeSkype?
Fikelela kwiFayile yeDatha yaseKhaya
Chwetheza% appdata% \_I-Skypekwibar yokukhangela yeWindows kwaye cinezela u-Enter.
Khangela incwadi eneenkcukacha ethiywe ngegama lakhoI-SkypeIgama. Yivule.
Emva koko khangela eyona. db kwifolda. EyakhoIngxoxo ye-Skypeimbalinguigcinwe kule fayile.
NgoJanuwari 29. 2021
Ngaba i-Skype igcina imbali yengxoxo?
Kangangeentsuku ezingama-30,I-Skypeigcina lonke ulwazi lwakho olusekwe kwisicatshulwaiikatiigcinwe efini. Ukuba ungathanda ukugcina ugcino lwefayile yakho oludeincokoKuya kufuneka wenze i-backups yesandla.NgoJanuwari 13. Ngo-2017
Eli nqaku limalunga nokubuyisela iimbali kunye neefayile ezisusiweyo, ukwenza oonxibelelwano kunye negama lokugqitha kwi-Skype indlela 1, yenza ugcino lwedatha yokulungiselela i-Skype kwaye uyisebenzisele iikhalori ngonaphakade kwaye ngoku ucofe ukugcina, imbali yengxoxo iya kuhlala igcinwa ulwazi malunga yonke Ukugcina imbali yengxoxo, ukuthumela kunye nokufumana iifayile zenza oku kulandelayo: Valiwe uSkype Yiya kwifolda Jonga igama lomsebenzisi Idatha yoSetyenziso Ukuzulazula i-Skype le folda igcina yonke idatha ye-Skype, kubandakanya zonke iiakhawunti ezingene kwi-Skype kule khompyuter efanelekileyo Ukukhetha ezi fayile kwi-flash drive, umzekelo, ukuyifunda ngoku emva kokufaka inkqubo yokusebenza okanye ukufomatha i-hard drive, kulula kakhulu, imbali yengxoxo kunye nazo zonke iifayile ezithunyelweyo nezamkelweyo ibuyiselwe kwinqanaba ngexesha lovavanyo olukhoyo lwekopi yakho ezenza zonke iihafu ukubeka le les kwifolda yomsebenzisi igama lomsebenzisi unedatha yokuhambahamba skype emva kokufaka i-skypemethod- indlela r I-estore imbali yengxoxo efunyenweyo kwaye yathumela iifayile kunye nokufikelela kwiakhawunti apho kungekho skype yedatha yogcino indlela skypechat Ibuyisela imbali emva kokufaka inkqubo yokusebenza kunye nesicelo ngokwaso xa iqala, iSkype izakukhuphela ngokuzenzekelayo ezinye idatha yayo yomsebenzisi kaJohn Hester egcinwe efini.
iifowuni ze-skype ezingahleliwe
Le datha igubungela iintsuku ezingama-30 ezidlulileyo. Ke kuya kufuneka wenzeni ukubuyisela imbali ye-Skype ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ezidlulileyo? Kuya kufuneka ubeke endaweni ifayile esele ikhoyo apha Jonga igama lomsebenzisi le -AB yokuHamba kwedatha ye-Skype ukungena kwakho kwi-Skype kunye nefayile efanayo equlathe yonke iMbali ye-Skype ukufumana ifayile enjalo. Ngaphambi kokubuyisela ulwahlulo lwam kunye nokuskena i-hard drive, masibuyisele ifayile ye-Skype kwifayile kwi-hard drive eyayinekopi yenkqubo nayo yonke imbali efakwe kuyo kwaye ucofe iqhosha lewizard ukuba ufuna ukubuyisela imbali ye-Skype emva koko kwinkqubo yokusebenza kwaye ufake kwakhona, ukuskena okukhawulezayo kwidiski enzima kwenziwa ukuba inkqubo yokusebenza ibuyiselwe kwakhona kunye / okanye idiski enzima ifomathiwe ukuskena idiski enzima kunye nohlalutyo olupheleleyo kule meko ndikhetha uhlalutyo olupheleleyo olulindileyo kude kulindwe ukuskena Inkqubo igqibile ukufumana iifayile ezininzi ukufumana ifayile efunekayo ngokukhawuleza okukhulu, sebenzisa umsebenzi wophendlo, nqakraza ngokulula kwisimboli seglasi ephezulu ekunene kwesikrini, ngenisa igama lefayile kwiwindow yefayile yomxhasi ebonakala kwaye ucofe kuyo Sele ikhona kwimeko yam, inkqubo ibonisa iifayile ezininzi kwigama lesifo sephepha kwaye ndikhetha eyona dala yokulinganisa idatha kwaye ndiyibuyisele ilungile ngoku yiya kwifolda jonga igama lomsebenzisi ledatha elizula i-Skype yourlogin skyp e kwaye ubeke endaweni esele ikhona ichaphaza eliyintloko le-DB kunye nembali ebuyiselweyo ye-Skype kwiintsuku ezingamashumi amathathu ezidlulileyo ibuyisiwe ngokufanayo.Ungacela iifayile ukuba zamkelwe kwaye zithunyelwe ngeSkype, kuya kufuneka ulandele amanyathelo afanayo kodwa ngesiqhelo kuchaphaza eliphambili DB ukufumana nokubuyisela zonke iifayile ezifunyenweyo ezithunyelwe ngeSkype okanye ifayile ethile oyikhangelayo.
Qaphela ukuba kuya kufuneka wazi amagama eefayile kwimbali yengxoxo ekufuneka uyibuyisile, emva koko ukope ezi fayile kwifolda yeFayile yam eFunyenweyo yeFayile, ebekwe apha Jonga igama lomsebenzisi we-AB Idatha ejikelezayo yeSkype yam endiyifumene kwiifayile zeSkype kwi Ngale ndlela imbali yengxoxo ye-Skype ibonisa iifayile ezithunyelweyo nezamkelweyo ezilahlekileyo ngenxa yokuba i-Skype okanye iWindows ibuyiselwe kwakhona, okanye i-hard drive yafundwa Ukufumana ukufikelela kwiakhawunti ye-Skype emva kokungena ngegama eligqithisiweyo okanye ungene kwi-Skype ulahlekelwe yiakhawunti ilibalekile ukufikelela ukuze iphinde ibuyiselwe kwangaphambili kuya kufuneka uhlengahlengise useto lwenkqubo ukuze i-Skype isebenze ngokuzenzekelayo ngaphandle kokujonga ukungena ngemvume kunye negama eligqithisiweyo kwaye emva koko i-Skype iqalwe ngendlela yesiqhelo ngesiqhelo olu khetho lusebenze ngokungagqibekanga, ukuze ungabinangxaki ngoku ufuna indawo yoqwalaselo lwefayile yeXML, equlathe idatha malunga nokungena kunye negama eligqithisiweyo lomsebenzisi, unokufumana le fayile kwikopi yogcino nakwinxalenye yokuqala yeli nqaku indlela yokwenza emva kokukopa kunye nokutshintsha endaweni yencwadi eneenkcukacha Umsebenzisi wegama lomsebenzisi ABdata uzulazula nge-Skype ukungena kwakho kwi-Skype Ukuba akukho skype yogcino, ungayibuyisela le fayile ngendlela ngendlela obuya kwenza ngayo kwi-debbi ephambili okanye kwiifayile ze-andendendype ezigqunywe uncedo lwesikhalazo seNtloko esigubungela yonke into ngalo mzuzu. Enkosi ngokubukela ndiyathemba ukuba eli nqaku liza kuba luncedo kuwe, ukuba ulonwabele eli nqaku, cofa iqhosha u-Like elingezantsi kwaye ubhalise kwisitishi sethu ukubona ngakumbi
Kwenzeka ntoni kwimbali yam ye-Skype xa ndiyicima?
Ukuba imbali yengxoxo ye-Skype icinyiwe, unxibelelwano oluhambelanayo luya kufihlwa ukuze abasebenzisi bangakwazi ukujonga okanye ukufikelela kubo. Nangona kunjalo, inyani, zisekhona kwi-PC yakho kangangexesha elithile.
Ndiyifumana phi imbali yam yengxoxo ye-Skype?
I-Outlook ivula kwaye ibonise iincoko zonxibelelwano nawe kwifolda yeMbali yeNcoko. Ukulandela umkhondo wencoko ethile, faka igama okanye amagama ebeya kuthi avele kwincoko oyifunayo, kwibhokisi yokukhangela ngaphezulu kwefestile ye-Outlook.
Ngaba kunokwenzeka ukubuyisa imiyalezo yakudala ye-Skype?
Kodwa uSkype akayicimi le miyalezo kule meko. Ukuchaneka, okoko nje usenakho ukufikelela kwiakhawunti ye-Skype onencoko kuyo kwaye ungayisusanga ngesandla imbali yakho yengxoxo, unokujonga kunye nokufikelela imiyalezo yakho yakudala ngeendlela ezingezantsi. Inyathelo 1.
Ndingalufumana phi unxibelelwano lwam lwakudala lweSkype?
Nokuba awukwazi ukungena kwiakhawunti ye-Skype nabo bonke abafowunelwa bakho bakudala, usenokuba nedatha yale akhawunti kwikhompyuter yakho. Ukuba uyayenza, ungayifumana inkqubo yokufunda iitafile zedatha kwaye zikuncede ufumane amagama eakhawunti zabahlobo bakho bakudala.